Lacagta meeleynta waa mid la siiyo qofka ka qaybgala barnaamijka meeleynta.
Sidee ku dalban karaa lacagta meeleynta?
Isla marka aad hesho go’aanka barnaamijka meeleynta ayaad Försäkringskassan ka codsaneysaa lacagta meeleynta. Waxaa ugu sahlan inaad ka codsato barta internet ee Försäkringskassan. Waxaad kaloo halkaas ka akhrisan kartaa sidaad u codsaneyso iyo goorta lacagtaas laguu dirayo.
Waa maxay shuruudda ku xiran helitaanka lacagta meeleynta?
Marka aad ka qaybqaadaneyso barnaamijka meeleynta waxaa muhiim ah inaad raacdo qorshaha aan kula dejinnay. Taasi waxay la micne tahay inaad ka qaybgasho hawlaha aan kugu la heshiinno. Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad si firfircoon shaqo u raadiso haddii ay qorshaha ka mid tahay.
Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad bil walba soo gudbiso waxa aad samayso oo aad soo sheegto haddii aad xanuunsato. Waa inaan annagu kuu oggolaannaa haddii aad u baahan tahay fasax.
Waa immisa lacagta la i siinayo?
Inta lagu jiro waqtiga baaritaanka waxaa lagu siinayaa 308 kr maalintii. Marka baaritaanku kuu dhammaado oo aan qorshe kula dejinno waxaa lagu siinayaa 231 kr maalintii. Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa lacago dheeraad ah oo kala duwan:
Försäkringskassan ayaa go’aamineysa lacagta aad qaadaneyso oo kuu xisaabinaya inta le’eg tahay lacagta aad xaq u yeelan karto. Waxaad barta internet ee Försäkringskassan ka akhrisan kartaa inta ay le’eg tahay lacagta aad xaq u yeelan karto.
Wixii lacago dheeraad ah
Lacagta safarada iyo degganaanshaha
Waxaa dhici kara in lagu soo celiyo kharashka safarada iyo degganaanshaha haddii tusaale ahaan waxbarasho u tagto degmo aan ahayn midda aad deggan tahay. Annaga ayaad lacagtaan naga codsaneysaa. Annaga ayaa go’aamineynna lacagtaan oo kuu xisaabineynna inta aad xaqa u leedahay.
Amaah aad ku iibsato alaabta guriga
Waxaad amaahan kartaa lacag aad ku iibsato alaabta guriga, sida qalabka guriga iyo alaab dhoob ah. Hadba aad lacagta aad amaahan karto waxay ku xiran tahay tirada qoyska, inta baahidaadu le’eg tahay iyo inta aad adigu lacag haysato. Waxaad amaahdaas ka codsan kartaa hay’adda kaalmada ardayda ee CSN oo go’aamineysa inta lacagta aad amaahan karto le’ekaan karto.
CSN amaahda alaabta guriga
Goorma ayaa lacagtaas la bixinayaa?
Försäkringskassan waxay lacagta bixisaa 26ka bil walba. Haddaba si ay Försäkringskassan uga gaarto inay lacagta soo dirto 26ka bisha waa codsigaagu soo gaaraa ugu dambayn 7da bil walba.
Maxaa dhacaya haddii aan xanuunsado?
Haddii aad xanuunsato waxaa muhiim ah inaad maalinta ugu koowaadba nagu soo wargeliso. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta maalmaha aad xanuunsanayd.
Maxaa dhacaya haddii ilmuhu iga xanuunsado?
Haddii aad u baahato inaad guriga ku hayso ilmo kaa xanuunsan, waxaa muhiim ah inaad maalinta ugu horreysaba nagu soo wargeliso.
Haddii aad xanuunsato ama ilmo xanuunsan xannaaneyso
Ma shaqayn karaa aniga oo isla markaasba ka qaybqaata barnaamijka meeleynta oo qaata lacagta meeleynta?
Ha, waa shaqayn kartaa adigoo ka qaybgala barnaamijka meeleynta. Laakiin lacagta meeleynta waxaa laga dhimayaa qiyaas u dhiganta mushaharka aad qaadato.
Ma qaadan karaa lacagta waalidka aniga oo qaata lacagta meeleynta?
Ha, waa qaadan kartaa lacagta waalidka adigoo ka qaybgala barnaamijka meeleynta. Laakiin lacagta meeleynta waxaa laga dhimayaa qiyaas u dhiganta lacagta waalidka oo aad qaadato.
Yaa bixinaya kharashka gaadiidka aad ku aado Xafiiska shaqada?
Haddii aad tahay qof sharciga degganaanshaha lagu siiyey qaxootinimo, magangelyo ama qaraabanimo, waxaa dhici karta in lagaa bixiyo kharashka aad ku tegeyso Xafiiska shaqada. Taasi waxay ku saabsan maalinta ugu horreysa oo aad booqaneyso.
Waxaan ka caawini karnaa inaad qabsato waqtiga aad safreyso. Warbixin dheeraad ah naga la soo xiriir telefoonka 0771-416 416.
Digniin iyo lacagta meeleynta oo wax laga dhimo
Haddii aadan raacin qorshaha aan kugu la heshiinno, waxaa dhici karta in laguu digo ama lacagta meeleynta lagaa gooyo hal maalin ama maalmo badan.
Digniin ama lacagta meeleynta oo wax laga dhimo
Soo gudbi waxyaalo aad samayso